« 05 mars 2009 – Film tena izy | «GAZETY_ADALADALA
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: Andry RAJOELINA, émeutes, démocratie, demokrasia, hetsi-bahoaka, mouvement populaire, riots, VIVA |
« [serasera] Re: Vaovao (tsy) azo antaroby izao. Jeudi 5 Mars 2009 0h50mn 57s Fisamborana an’i Andry Rajoelina »
titi, on 06/03/2009 at 12:29 said:
Misaotra hatrany mampita vaovao e !
Saingy mahaontsy ny fo ny zava misy. Nisy sary navaokan’ny mpanao gazety sasany, izay hitako fa tena mampalahelo tokoa dia nisy vehivavy nampandolian’ireto miaramila gasy ireto. Fa nahoana ? tsy fantatra ny antony. Misy koa sary ny mercenaire (???) sa iza marina vazaha 2 na telo manao solomaso mainty teo akaiky ny camion nisy ireo miaramila ireo. Inona marina no tena asa ataon’ireo olona ireo, ary raha toa ka journaliste, nahoana no tsy nisy fakan-tsary na camera ? Mahaontsa ny zava-misy. Ary maniry sy mivavaka ny fiverenan’ny filaminana. Titi.
Ny tsy hitanareo aza dia ny fandefasana ireo izay lazainy fa mpanakorontana -vokatry ny arrestation sommaire- any anaty rano maloto. Tonga dia atsipy, na atosika, araka izay tiany ihany io. Ka raha sendra mba nahay nianjera tany anaty rano ilay olona ka tsy lena ny lohany, dia baikoana mihitsy handena ny lohany, na dia tsindriana tsotra izao hiditra any anaty rano ny lohany. Antsika no mieritreritra
Te hahalala, on 06/03/2009 at 1:01 said:
Nilaza ny mpanoratra hoe: « Tsy sahy nalaina moa ny sarin’ny daroka sy ny ompa, noho ny fitaovana tsy zarizary,nefa kosa azonareo atao ny mijery izany amin’ny sarin’ireo fahitalavitra manana tranonkalan-tserasera. »
ka saika hanontany sao dia mety misy afaka manome ny adiresy ahafahana mijery ilay fahitalavitra manana tranonkalan-tserasera. Misaotra mialoha
azonao atao ny mijery ity http://www.tvplusmadagascar.com
ikalamako, on 06/03/2009 at 2:02 said:
titi : iny izy telo mirahavavy sa mianaka nampandohalihana iny dia efa tena mampiseho ny toetsaina mirefarefa amin’ny tany. Tsy hita intsony izay ilazana ny any amintsika, ory ny fo.
Misy namana nitaraina fa tsisy zavatra de valeur azonao entina intsony fa ny miaramila mody manakana sy misava anao indray no mangalatra ny volamena eny an-koditrao na ny finday sy ny vola any anaty poketra na kitaponao – loza iray loza roa loza telo.
Fa ilay kapoty no nahavariana ahy rey olona. Tsy hoe zah no vetaveta saina ka iny ihany no tsikaritro an, fa raha ireo habetsahany @ toerana iray ireo mahavariana ihany hoe mifanelaka ve zany ny rasila manao garde amin’ny alina ? beurk. Ka ny olona aza tsy mahazo mivezivezy fa tratran’ny kovra fe koh ! Sa manolana amin’ny andro antoandro be nanahary rizareo ? Tsy misy fanazavana re na azo atolotra ve momba ireo ???
Dia mitandrema ihany elah ry avylavitra fa ny aina tsy ananampiry kle. Zahay faly mahazo vaovao fa na izany aza, aleo izahay ho taraiky toa izay elah no hanefa any kah !
Miala tsiny aminareo aho fa hilaza izay hitanay teo Behoririka omaly. Tsy izaho irery no nahita an’ity fa ireo mpanao gazety maro niaraka teo dia samy nahatsikaritra ny fomba fitafy sy ny fahaiza-manaon’ireo ‘miaramila’ teo an-toerana. Nisy taminay no nahamarika namany iray ‘mpivarotra devizy’ eo Analakely amin’ny andro andavanandrony, ary lasa ‘anaty tenue’ tampoka nony nisy ity raharaha ity. Nifanontany izy mitsamy hoe fa inona lety no ataon’ialahy ity? Dia namaly ilay ranamana fa bizna ny azy. Tena misy tsy mahay mandefa ny lance-grenade akory aza ry zalahy fa eny vao atoron’ny namany. Koa azagaga raha ny iray kamio no mety hiara-hipoaka eny ampandehanana eny sy hiara-maty ao anatiny ao, satria olona tsy natao ho amin’izany ve no asaina mirotsaka hitandro ‘filaminana’. Samy manana ny ataony hoe ‘filaminana’ koa moa isika rehetra e!
Ranomaso, on 06/03/2009 at 1:12 said:
Tsy fantatrareo ve fa nanomboka taminy 7/02/09 dia hifantrapatratra izao ny olona malagasy maty, ankizy, tanora, olona mbola tsy nahafantatra izany atao hoe manana ny hoaviny izany akory?
Tsy misy hajany amin’nyy maha-olombelona azy intsony ny vahoaka malagasy: rehefa avy nampivarotana tena ny ankamaroan’ny vehivavy malagasy, dia izao ampadoalihana eny an-dalambe izao… izany sisa ny hajan’ny Reny malagasy, Reny nipoiran´ ireo taranaka rehetra.
Ny alika sy ny akoho ary ny omby aza mbola misy hajany lavitra noho ireo olom-belona, vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao, izay aripadripaka amin’ny fomba mahatsiravina.
Tezitra aminy karana sy ny sinoa ary ny vazaha ve isika? Ahoana moa no antenaintsika ny hanajan’izy ireo ny zon-tsika? Tsy diso toerana ve izany raha isika samy isika malagasy aza mahavita mifandripaka sy mifanao tsinontsinona toy izao, amin’ny anaran’ny vola sy fahefana, amin’ny anarany fitiavan-kely.
Inona no hanadiovan-tsika izao rà be dia be milatsadatsaka erakin’ny tanàna izao?
Aoka ho tonga saina isika rehetra fa hamela ratra lalina hatrany amin’ny taranaka amam-para izao toe-javatra mitranga aminy firenentsika izao, firenena izay mety tsy firenentsika intsony akory, tanindrazana izay mety ho tanin’ireo razana efa nialoha lalana fa mety tsy ho tanin’ireo taranaka fara amam-dimby intsony akory. Satria efa toa namidy mora, varo-boba ny ràn-tsika ankehitriny.
Sarobidy hono ny aina, kanefa ankehitriny toa ny zavatra tsy manan’aina no sarobidy lavitra noho ny ràn’ny olombelona malagasy eo imason’ny olona maro. Jamba ve isika sa izany no midika fa efa ao anatin’ny haizina tanteraka isika?
Maneho etoana ny fiarahako miory amin’ireo fianakaviana izay namoy ny havana tiany sy ny zanany malalany aho, amin’izao andro matroka mampisavorovoro ny vahoaka sy ny firenena malagasy izao.
Raha mbola manoratra eto anefa dia mbola manantena hatrany fa any andro iray, hiverina eo am-pelatanan’ny olona malagasy tsirairay ny hasiny, ny haja sy ny zo amin’ny maha-olombelona azy, mba ho mendrika indray ireo Razana rehetra efa nialoha lalana.
sipakv, on 06/03/2009 at 2:29 said:
ary loza fa na miaramila na « mpirotaka » samy mamely avokoa ! de ahoana koa izany kapoty e. tena tsy izy mihitsy, sa de mandeha koa ny commerce de nuit amin’ny tovovavin’alina. tsy azoko mihitsy.
fa dia soa fa misy andrajentilisa sy avylavitra aloha hanarahana vaovao e.
le hoe mercenaires, sao dia mba miaramila instructeurs sudafr nalefan’ny sadc?
Te hahalala, on 06/03/2009 at 4:25 said:
tena tsy mandeha ilay site http://www.tvplusmadagascar.com tsy mety mahita an’ilay video mihintsy ny tenanay sao dia misy hafa ahafana mahita an’izany miaramila midaroka izany fa tsy izy intsony izany eh
ravalocratie, on 06/03/2009 at 5:06 said:
Tsy mandeha ilay TVplus (site). Sao dia mba misy hevitra. Misy manan-kevitra ve ny amin’izay tokony hatao mba hanaparitahana izao toe-javatra izao amin’ny teny maro samy hafa mba ho ren-tany sy ren-danitra satria tsy mety kosa ilay tsy fanajana ny zo sy ny hasina mahaolona ataon’ny miaramila. Na momba ny fanjakana aza izy ireo dia tsy maintsy tandrovana ny zo sy hasin’ny mahaolombelona.
Tena miala tsiny aminareo fa noho ny fandrahonana ho faty mahazo ireo haino amanjery sahy maneho ny zava-misy iainan’ny vahoaka, dia tsy mandeha koa izao ny TVPlus hatry ny omaly. Niandry ihany izahay ny amin’ny hiverenany fa dia e e e. Angamba dia hipetraka eto tokoa ilay hoe ‘one way thinking, one way doing’. Asa raha mba mahalaza izay tiako lazaina ireo teny angalisy kely vôtako ireo.
Vice pdt FJKM Marc R., on 07/03/2009 at 2:23 said:
AOKA NY FIFAMONOANA EH
Marina ny anao e!
FEO NY FIERITRERETANA, on 07/03/2009 at 2:26 said:
Toa efa mahazatra ny maheno hoe misy maty atsy misy maty aroa, tsy misy taitra intsony isika. fahavoazana arapsychologie sarotra sitranina izany.
Ny fanahy mahaolona mantsy no tsy ao intsony fa toy ny biby isika